apple & apos; s 5g iphone 12 mini inogona ikozvino kuve yako yemahara pasina yekutengesa chero chinhu mukati
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s 5G iPhone 12 mini inogona ikozvino kuve yako yemahara pasina yekutengesa chero chinhu mukati
Apple & apos; s 5G iPhone 12 mini inogona ikozvino kuve yako yemahara pasina yekutengesa chero chinhu mukati
Kupiwa kusafarirwa sei iyo 5G-inogoneswa iPhone 12 mini yakaratidza zvakanyatsobva pabheti, zvinoshamisika kutaura chokwadi kuti & apos; yakatora nguva yakareba kune mumwe wevatatu vepamusoro veUS vanopa masevhisi kuti vatange chekutanga chikuru kuita Apple & apos; s compact 2020 simba reimba.
Isu & maapos tiri kutaura zvizere $ 700 dhisikaundi inowanikwa ne (ndoda) pasina tambo dzakabatanidzwa pa Verizon (yevatakuri vese vakuru) ye (chaizvo) yakaganhurirwa nguva. Izvo zvinounza mutengo wekutanga weiyo 5.4-inch handset pasi kune ... $ 0, uye zvese zvaunofanirwa kuita kuti ukwanise iyi inotapira 'freebie' ndeye'kutenga 'iyo 64GB iPhone 12 mini 5G pane Unlimited chirongwa.
Kunyangwe iwe uchidaro parunhare & apos; mutengo wenguva dzose wekutengesa kana nehurongwa hwekubhadhara chishandiso, iwe & apos; tiri kutarisa yakazara yakazara $ 699.99 mune promo kiredhiti yakashandiswa kuaccount yako mukati memakore maviri. Mune mamwe mazwi, kana iwe ukasarudza zvikamu zvepamwedzi, yako $ 29.16 kubhadhara kunodzoserwa mwedzi wega wega kusvikira ... iyo iPhone 15 yasvika.
$ 0 $ 69999 Yapera
Ipo T-Mobile ichangobva kugadzira mafungu akakomba ayo ne yemahara iPhone 12 uye 12 mini Amai & maapos; s Zuva rekusimudzira , musiyano wakakosha pakati peizvozvo uye izvo Big Red zvauri kupa parizvino ndezvekuti iwe haufanire kushambadzira mune chero rudzi rwechigadzirwa chiripo panguva ino kutenderera
Iwewo haufanire kusvetukira chero kune mamwe hoops kana kusangana chero akawedzera mamiriro, uye zvinoshamisa zvakakwana, zvambotaurwa $ 700 mutengo wakatemwa unoshanda kune 128 uye 256GB ekusiyanisa akasiyana e5G-anokwanisa iPhone 12 mini futi, kuunza iwo pasi kune angangoita $ 50 uye $ 150 zvakateerana.
Ramba uchifunga kuti ichi chiitiko chepamhepo-chega chakagadzirirwa kupera kupera kwesvondo, uye akawanda mamodheru akatorongwa seakadzoserwa paVerizon & apos; s yepamutemo webhusaiti panguva yekunyora uku, kutumira mune imwe nyaya yemavhiki (misoro ) kana iwe uchimhanyisa uye woisa odha yako nekukurumidza sezvazvinogona.
Kunyange zvinoshamisa zvisingaiti mukuyedza kwayo kudzosa compact handsets kumashure muchitaira, iyo iPhone 12 mini yakawana imwe yakasimba yakasimba wongororo gore rapfuura, tichienderera mberi tichiratidza pane yedu runyorwa rwe 2021 & apos; akanakisa mafoni mari inogona kutenga uye zvine nharo kuvhara yakanakisa bhajeti 5G mafoni kunze uko maererano nesimba mbishi (pazvishoma) izvozvi kuti iwe ugone kuwana uyu anoderera mukomana akaipa ne $ 0 zvese mune zvese.
chinyorwa kumucheto vs iphone 6 plus
Kubata - Maitiro Ekuchengetedza Saiti Yekupindura
Yakanakisa noti-kutora maapplication ePad uye Apple Penzura
Iyo GoPro Hero 3 chiito kamera yakazara zvachose! Heano & maapos ekuzvidzora kubva kune smartphone
Google Pixel Buds vs AirPods vs Galaxy Buds Plus maficha uye maficha
Motorola inodzosa inonakidza BOGO (tenga imwe, tora imwe yemahara) dhiri
Apple & apos; yazvino TV kushambadza inoratidza izvo iyo App yekutevera Transparency ficha inofanirwa kuita